Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibedda oo si rasmi ah maanta xilka ula wareegay. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia - Idman news
Wasiirka Cusub ee Arrimaha Dibedda oo si rasmi ah maanta xilka ula wareegay. – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Muqdisho-KNN-Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Xiriirka Caalamiga ah ee Dowladda Soomaaliya Cabdisaciid Cali ayaa maanta xilka kala Wareegay Wasiirkii hore ee Wasaaradda Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud, iyadoo kulanku goob-joog ka ahaa Wasiir Ku-xigeenka Cusub ee Wasaaradda Maxamuud Cabdi Xasan Beekoos.
Cabdisaciid Muuse Cali Wasiirka Cusub ee Wasaaradda Arrimaha Dibedda oo khudbad ka jeediyey Munaasabadda ayaa soo bandhigay qorshihiisa ku aaddan dardar gelinta shaqada Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga.
Dhankiisa, Wasiirkii Hore ee Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ayaa ka warbixiyey shaqooyinkii muhiimka ahaa ee uu soo qabtay intii uu xilka hayey, isaga oo Wasiirrada Cusub u rajeeyey sii ambaqaadidda waajibaadyada qaran ee horyaalla.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka Xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo goobjoog ka ahaa Munaasabadda Xil Wareejinta ayaa bogaadiyey shaqooyinkii uu soo qabtay Wasiirkii Hore, isaga oo Wasiirrada Cusub ugu hambalyeey wajibaadka qaran ee ay qaadeen.
Munaasabaddan waxaa ka qayb galay masuuliyiin ka socdey Goleyaasha Dowladda ee Xukuumaadda, xubno ka tirsan Baarlamaanka, Howl wadeennada iyo Diblomaasiyiinta Wasaaradda Arrimaha Dibadda ah.
Previous Al-Shabaab oo war kasoo saaray qaraxii is-miidaaminta ee waddada Cabdiqaasim
Next Muuqaal Jawaari “Si daahfuran waxaa loo samaynayaa gaboodfal lagu talaxtagayo xuquuqda muwaadinka, xaqiisa siyaasiga ah oo ah in la doorto iyo inuu wax doorto waa laga horyimid”